आज भाइटीका: टीका लगाउदा कता फर्केर लगाउदा उत्तम हुन्छ ? (पुरा विवरण पढ्नुस) -
Homeसमाचारआज भाइटीका: टीका लगाउदा कता फर्केर लगाउदा उत्तम हुन्छ ? (पुरा विवरण पढ्नुस)
आज भाइटीका: टीका लगाउदा कता फर्केर लगाउदा उत्तम हुन्छ ? (पुरा विवरण पढ्नुस)
November 9, 2018 Spnews समाचार 0
दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ । दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताए ।
टीका लगाइदिने पश्चिम र टीका लगाउनेले पूर्व फर्केर टीका लगादा शुभ हुने अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ ।
बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एक पटक आजैका दिन मात्र खुल्ने गर्दथ्यो । दिदीबहिनी नहुनेहरू भाइटीकाका दिन यसै मन्दिरमा गई पूजा, दर्शन गरी टीका लगाउने गर्दछन् ।
विसं २०३५ पछि नियमित रूपमा रानीपोखरीभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर खुल्न थालेको हो ।
पशुपति नाथलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर आजको राशीफल पढ्नुहोस् । कार्तिक २३ गते शुक्रबार
कुलमान घिसिङलाई महाबिर पुनले किन ‘गोरू’ भने ?